★Iisilingi eziPhakamileyo★Ibhotwe lasebukhosini★NeTerrace yaBucala - I-Airbnb
★Iisilingi eziPhakamileyo★Ibhotwe lasebukhosini★NeTerrace yaBucala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAndra
Igumbi eli-1 elibanzi elinesilingi eziphakamileyo ezantsi edolophini malunga neemitha ezili-150 ukusuka kwihotele yaseHilton kwisakhiwo esandula ukulungiswa, kufutshane nemyuziyam, iikhefi, iivenkile zokutyela, iivenkile. Ifakwe kweyona ndawo yasedolophini enehip kunye nefashoni (Isitalato saseCalea Victoriei). I-Cismigiu Park yimizuzu emi-3 kumgama wokuhamba, malunga nama-200m. Imizuzu eli-10 uhamba ukuya kwiDolophu eNdala, ngaphandle ngokupheleleyo kwengxolo evela kwiiklabhu zeDolophu eNdala kunye nee-pubs.
Indawo yokuzimela egqibeleleyo kwintliziyo ephithizelayo yesixeko esixakekileyo. Kude nezihlwele, kodwa zilungele iindawo eziphambili zesixeko.
Istudiyo sisandula ukuhlaziywa ngokupheleleyo kwaye sinefanitshala entsha neyangoku kuquka i-Queen size bed (160x200). Senze i-ambiance yokuba lundwendwe lomntu kwikhaya lethu labucala ngochuku olukhethekileyo. Iinkcukacha ngobuhle be-chic kodwa yangoku iyenza ibe sekhaya. Uya kufumana isitayile esiqhubela phambili esinezihombiso ezikhawulezayo kwigumbi lethu kunye nezinto ezikhethekileyo.
Ngokuqinisekileyo imbonakalo iya kuba negalelo elikhulu kumava akho. Iflethi ibekwe kumgangatho we-9 wesakhiwo (i-elevator ekhoyo) ijonge enye yezona ndawo zibalaseleyo eBucharest - iSala Palatului; INdlu yePalamente inokubonwa kwi-terrace nayo.
44" HDTV ene-I-Chromecast, izitishi zeTV eziqhelekileyo
4.96 · Izimvo eziyi-310
Olu luluhlu olufutshane oluneemyuziyam ezikufutshane/iindawo zokundwendwela (imizuzu embalwa umgama wokuhamba):
1.Ibhotwe laseCantacuzino, elibambe iMyuziyam yaseGeorge Enescu
(URL HIDDEN) yeeNgqokelela zobuGcisa
4.Ihotele yase-Athénée Palace, ngoku eyiHilton
6.Imyuziyam yeSizwe yoBugcisa baseRomania
7.Ithala leencwadi leYunivesithi yaseBucharest
9.Piața Revoluției (Revolution Square), kuquka neSikhumbuzo sokuZalwa ngokutsha
15.Bucharest Financial Plaza
16.Imyuziyam yeSizwe yeMbali yaseRomania
17.ICasa de Economii kunye neConsemnațiuni (CEC)
18.Ithiyetha yeSizwe (TNB)
Ukuba ujonge ukonwaba, kukho nezinto ezininzi ezinokwenzeka. "Idolophu endala" yaseBucharest - eneendawo zokutyela ezingaphezu kwama-250 kunye neeklabhu zifumaneka kwimizuzu eli-10 kuphela yokuhamba ukusuka kwigumbi. Ungalibali malunga neSala Palatului (ngaphaya kwesitrato - indawo yemiboniso, iikonsathi eziphilayo kunye nemidlalo yobugcisa.)
Umbuki zindwendwe ngu- Andra
Siya kufumaneka 24/7 ngemibuzo/iimfuno zakho ngefowuni kunye/okanye ngemiyalezo yakwa-Airbnb.
Uya kuba nezitshixo zakho kwaye unokuza kwaye uhambe njengoko uthanda.